Ukutya Isigama magama amaNgesi abafundi
Ukutya kunye nokuzonwabisa kunye kunye kunikeza ithuba lokuthetha isiNgesi kwaye ujabulele. Isimo sokuphumla sokwabelana ngokutya sinceda incoko ihamba. Ukupheka kunye nokuthenga ukutya ukuze ulungiselele isidlo isiNgesi lihle kakhulu. Kukho amagama amaninzi okufuneka ufunde ukuze uthethe ngokutya, ukuthenga ukutya , ukupheka ukutya kunye nokunye. Esi sikhokelo kwisigama sokutya siyakunceda ukuba ungabonakali nje iintlobo ezahlukeneyo zokutya, kodwa nendlela olungiselela ngayo nokupheka, kwaye zeziphi izitya zokutya ezikhoyo xa uhamba ukuthenga.
Indlela efanelekileyo yokufunda isigama sokondla kukudala isilmagama somthi okanye isichazi sesigama . Qala kwiziko okanye phezulu kwiphepha elinomxholo othi "iintlobo zokutya" kunye nekhonkco kwiindidi ezahlukeneyo zokutya. Ngaphantsi kwala manqaku yibhala iintlobo zokutya. Xa uqonda iintlobo ezahlukeneyo zokutya, ukwandisa isigama sakho sigxina kwizifundo ezinxulumene nazo. Nazi ezinye iziphakamiso:
Iziphumo zokuchaza ukutya
Ukuze kukuncede uqale, uluhlu lwesigama sokutya lubonelelwe ngezantsi. Ezi zintlu ziphela nje. Kopisha amagama kwiphepha lephepha uze uqhubeke ukongeza kwoluhlu. Zinike iindawo ezininzi ukuze uqhubeke udibanisa uluhlu lwesigama sokutya njengoko ufunda amagama amatsha. Kungekudala uzakukwazi ukuthetha ngokutya uze ujoyine kwingxoxo ngokupheka, ukutya kunye nokuthenga ngokulula.
Ootitshala banokuziva bekhululekile ukuthatha ezi tshathi kwaye babashicilele ukuba basebenzise eklasini njengendlela yokusebenzisa isigama sokufunda ukuze bancede abafundi baqale iingxoxo ngokutya.
Hlanganisa oku kunye nokuzilolonga kunye nemisebenzi enjengemidlalo yokudlala, imisebenzi yokubhala iresiphi, njl njl.
Ukusela / ukusela soda kofu amanzi iti isiselo somdiliya ibhiya ijusi
Yobisi ubisi ushizi ibhotela ukhilimu yoghurt quark isiqingatha nesiqingatha
Dessert ikhekhe ikhukhi tshokoleji i-ice cream brownies ipayi iikram
I ziqhamo apile orenji ibhanana iidiliya ipanapula ikiwi ilamuni
Iingqolowa / iinqatha ngqolowa rye rye cereal utywala isonka kuluhlu amazambane
Inyama / inhlanzi yenkomo inkukhu inyama yehagu islamoni umqala inyama yegusha ibhokhwe
Imifuno iimbotyi ilethasi izaqathe ibrokholi icauliflower ipeysi icebo leqanda
Izijonge ezisetyenziselwa ukuchaza Ukutya
Ukutya Ukulungiselela Ukutya Ukupheka Impahla
ukucima bhaka blender
i-peel Fry ipani yokufraya
kuxuba umphunga colander
slice ubilise kettle
umlinganiselo mva ibhodwe
Amasebe Abasebenzi Iintetho Iilwimi
zobisi nobhala ilayini shenxisa inqwelo
velisa umphathi umgca fi kelela into
zobisi umxheli inqwelo the lekisa iimveliso
Ukutya ikusemkhenceni fishmonger bonise izinto zokuskena
isikhwama ushukela umgubo
ibhokisi cereal abaphangi
ikaroni maqanda ubisi
unakho isobho iimbotyi
ingcambu jam lwesardadi
iphakheji hamburgers neodle
qhekeza utywala intlanzi
ibhotile isiselo somdiliya ibhiya
ibha isepha tshokoleji
Emva kokuba ubhale uluhlu lwesigama sakho, qalisa ukusetyenziswa usebenzisa isigama kwisicoco nokubhala. Nazi ezinye iziphakamiso malunga nokusetyenziswa kwesigama sokutya:
Yenza uludwe lokuthenga uze uqhathanise iimveliso
Bhala iresiphi ngesiNgesi , qiniseka ukuba uquka izithako, imilinganiselo, izitya kunye nemiyalelo
Chaza isidlo esimnandi osibhale ngaso
Xoxa ngokuthanda kwakho ukutya kunye nokungathandwa ngumlingane
Ukusebenzisa isizwi sakho sokutya kuya kukunceda ukuba ufunde ngokucacileyo kwisifundo esisodwa ukuba wonke umntu ehlabathini uthanda ukuxoxa: ukutya nokutya. Kungakhathaliseki ukuba yeyiphi inkcubeko okanye ilizwe, ukutya kuyisifundo esikhuselekileyo esiya kukukhokelela ekuxoxeni ngezinye izihloko .
Zama ukubuza umntu malunga nesidlo esiyithandayo kwaye uya kufumana ukuba uxoxa malunga nokupheka ukutya okuthandayo. Ncoma umdlalo wokutyela uze utshele umntu ngesidlo esikhethekileyo onayo, kwaye incoko iya kuhamba.
Indlela Yokuthi "Ndiyaxolisa" ngesiJamani
Gxininisa kwiItrasal Verbs malunga nokuThetha
Funda ukufunda njenge-BB King
9 "Imfazwe isiGrike" iMartial Military
Iimfundiso Nge-Olmec yakudala